Archive du 20181127
Kandida Marc Ravalomanana Mitombo hery hatrany
Tsy mitsahatra ny manamafy ny kandida ho filoham-pirenena, Marc Ravalomanana fa vonona hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana.
Ao anatin`ny kihon-dalana ahafahan`ny Malagasy miroso amin`ny tsaratsara kokoa, amin`ny fiainana metimety kokoa, na koa mihemotra amin`ny fiainana ratsy ny firenena amin`izao.
Maitre Willy Razafinjatovo Miandrandra filoham-pirenena hamongotra kolikoly
Nanambara ny mpahay lalàna, Willy Razafinjatovo na Olala fa tsy maintsy hisy ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara.
Serge Zafimahova “Ravalomanana no mahavita ny fampihavanana ara-toekarena”
Naka lesona tamin’ny tantara, ary afaka manitsy ny mety ho lesoka tamin’ny fitondrany i Marc Ravalomanana. Nanana fanetren-tena nanaiky izy matoa voaongana teo amin'ny fitondrana.
Mafampana ny toe-draharaha Fiara iray kila forehitra teny akaikin’ny HCC
Fotoana fohy tsy hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana rahampitso 28 novambra amin’ny 10 ora maraina,
Fampandaniana an-dRavalomanana Tafatsangana ny K25 Alasora
Tafajoro eny amin’ny Kaominina Alasora ny Komity hampandany ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25 na ny K25.
Antananarivo madio No tanjona ka tadidio. Teny filamatra mila ampiharina, Raha tena vonona tokoa isika ny hanarina.
Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina Maimaim-poana ny fidirana mandritra ny lalao CCOI Handball
Miditra eo amin’ny andro faha-4 anio talata 27 novambra 2018 ny fifaninana iraisam-pirenena CCOI « Fiadiana ny Amboaran’i Afrika eo amin’ireo Ekipa tompondaka lahy sy vavy aty amin’ny Ranomasimbe Indiana 2018) taranja
Festival Allée des baobab andiany faharoa Nampientanentana ny tanànan’i Morondava
Tontosa ry nifarana tamin’ny alahady 25 novambra 2018 teo, tany Morondava, raha nanomboka tamin’ny 17 novambra teo ny andiany faharoa tamin’ny hetsika « Festival Allée des baobabs »
Sambatra tokoa izay henjehina !
Samy milaza azy ho kristianina daholo amin’izao ny ankamaroan’ireo mpisehatra politika goavana eto amin’ny firenena.
Tranga nampihorin-koditra Avotra ihany ilay zaza norambasan’ny alika be
Zava-doza no nitranga tao Toamasina ny faran’ny herinandro teo. Alika vazaha na irony antsoina hoe : “chien de race” irony no tafavoaka tao amin’ilay tokantrano niompy azy ka niantsambotra tamina zazakely vao efa-taona monja sendra nilalao.
Boriborintany fahenina Zaza roa matin’ny kitrotro, norarahana ranom-panafody ny tanàna
Nahitana trangan’aretina kitrotro tany amin’ny fokontany Ambohimiadana atsimo, Boriboritany fahaenina, kaominina Antananarivo Renivohitra ny zoma lasa teo.
Politika mikatona an’i Amerikana Hanimba tsikelikely ny fampiasana ny dolara
Ny vola dolara no mitana ny toerana voalohany amin’ny fifanakalozana atao maneran-tany. Izy no vola manan-danja indrindra satria saika mampiasa azy daholo ny firenena rehetra amin’ny sehatra fifanakalozana ara-barotra ary efa mipetraka tanteraka eo amin’ny rafitra ara-bola manerana izao tontolo izao izany.
Andoharotsy kaominin’i Vineta any Sakaraha Nitrangana vono olona nahatsiravina
Famonoana mahatsiravina no natao tamin’ny zanak’i Sazalahy Tsianihy filohan’ny DISTIM Atsimo Andrefana sy ny vadiny tao amin’ny fokontanin’Andoharotsy kaominina ambanivohitr’i Vinesta Distrikan’i Sakaraha tamin’ny alahady 25 novambra 2018 maraina.
VOTSOTRA I FAEZ KAMIS
Votsotra tamin'ny telo ora sy sasany omaly ilay karàna tompon'ny kaoperativa Transfy, Faez Kamis.
Hampahafantarin’i Hoby Rasolofoarimasy etsy amin’ny IFT Andavamamba ny 12 desambra izao ny amboaran-tonokalony mitondra ny lohateny hoe « Vikina ».
Hetsika “Gilets Jaunes” any Frantsa Ahiana hivadika ho revolisionina…
Mikorontana tanteraka ao Lafrantsa amin`izao fotoana izao manoloana ny hetsiky ny “Gilets Jaunes”.
Fakon’Antananarivo Nanaitra ny minisitry ny rano Ravalo
Tsy nahavita ny iraka nampanaovina azy momba ny fanesorana fako ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo ka naato tamin’ny asany ary efa nosoloina olona vaovao.
Antso mivantana avy hatrany amin’ny minisitry ny rano sy ny ben’ny tanàna no nataon’Andriamatoa Marc Ravalomanana,
Tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka Lasibatra ny 65 %-n’ny ankizy ao Matsiatra ambony
Tafakatra 65 % ny tahan’ireo ankizy lasibatry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony.
Hifehezana ny toekaren’i Madagasikara Ampiadiana mba hifamotika ny Malagasy
Nohenjehina fatratra i Marc Ravalomanana fa nanao ampihimamba tamin’ny asa fandraharahana nataony.
Tahan’ny fitomboana ara-toekarena 5,2% ny tanjona ho an’i Madagasikara amin’ny 2019
5,1% ny tahan’ny fitomboana ara-toekarena napetraka fa hotratrarina tao anatin’ny volavolan-dalànan’ny tetibolam-panjakana 2018 (LFI).